Mozika sy ny ho avy finday | Martech Zone
Mozika sy ny ho avy amin'ny finday
Talata, Novambra 20, 2012 Douglas Karr
Tsy miresaka firy momba ny indostrian'ny mozika eto amin'ny bilaogy teknolojia marketing izahay, saingy, angamba, iray amin'ireo ohatra lehibe amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa izany. Nifindra avy amin'ny haino aman-jery mozika izahay ho lasa fitaovana mozika… ary izao dia mifindra amin'ny fitaovana mankany amin'ny streaming izahay. Nilaozako tanteraka mihitsy ny iTunes ary ampiasaiko izao Spotify amin'ny zava-drehetra. Ny Discovery dia mitranga amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera misy ahy ary amin'ny alàlan'ny radio Spotify izay mitambatra toy ny tsiro mozika hanomezana sakafo vaovao.
Ho an'ny mpitendry zavamaneno dia tsy tanjona intsony ny mosarena sy milalao ny fony ho an'ny vahoaka rehetra azo atao mba hisarika ny sain'ny mpitantana indostrian'ny firaketana. Mbola milalao ny fony ihany izy ireo, saingy izao dia ny manoloana ny mpankafy amin'ny alàlan'ny media sosialy. Manangana mpijery ara-tsosialy ary manaraka ny mpitantana firaketana. Rehefa mandeha finday ny mozika dia zava-dehibe ny fampivelarana ny fisian'ny finday ary izany no izy MobBase Vita ny - mamolavola rindranasa manokana izay manampy ny tarika hitombo ny fototr'izy ireo ary mizara mozika amin'ny findainy.
Ity infographic avy amin'ny MobBase ity dia manome fomba fijery vitsivitsy momba ny tontolon'ny mozika miova ary torolàlana fahaveloman'ny mpanakanto hahafehy azy.
Tags: mobbasefinday fampiharanamozika findayMusicmozikafampiharana finday mozikaspotify
Marika sy Marketing amin'ny atiny: Tandremo ny Hype